Enwere m ike ịnweta nlele efu?
Ee, 1 yard nke ihe nlele n'efu dị, anyị nwere ekele maka nghọta gị na a ga -anakọta ụgwọ ibu.
Ị nwere MOQ maka ụcha egosiri na njikọ ahụ?
Enweghị MOQ maka ngwaahịa dị mgbe niile, ị nwere ike ịtụ nha nke ịchọrọ. Maka ihe agba agbaziri ahazi, a ga -enwe 300 yad MOQ.
A na -ebupụ ngwaahịa ngwaahịa mgbe niile n'ime ụbọchị 3 mgbe ịkwụchara ụgwọ. Maka oge nrụpụta mmepụta ọhụrụ bụ ụbọchị 15-20 mgbe ị natasịrị 30% nkwụnye ego. Maka agba ahaziri iche ụbọchị 7 ụlọ nyocha yana oge nrụpụta ụbọchị 20.
Kedu ka akpụkpọ anụ sịntetik ma ọ bụ akwa akwa dị?
Maka akpụkpọ anụ sịntetik ọ bụ ihe na-emebi emebi gburugburu ebe obibi yana ọ nwere ike ịdịru afọ 3-5 n'ọnọdụ dị mma dịka ịghara ikpuchi oke ikuku na oke iru mmiri. Maka akpụkpọ anụ microfiber ndụ nwere ike ịdị ihe karịrị afọ 10.
Enwere m ike ịnweta katalọgụ gị?
N'ihi ngwaahịa dị iche iche, biko gwa anyị ihe ndị ịchọrọ nke ọma ka anyị nwee ike ịhazi gị.
Anyị enwere ike ịnwe akara anyị ma ọ bụ udiri anụmanụ na akpụkpọ anụ?
Biko kpọtụrụ anyị maka nkọwa ndị ọzọ.
Kedu otu anyị ga -esi ekwe nkwa ịdị mma?
Na-abụkarị nlele tupu nrụpụta tupu imepụta oke.
Nnyocha ikpeazụ oge niile tupu mbupu.
Kedu ihe kpatara ị ga -azụta n'aka anyị ọ bụghị n'aka ndị na -ebunye ndị ọzọ?
Anyị bụ ọkachamara n'ichepụta, n'ichepụta na ire ahịa PVC/PU/Semi PU/akpụkpọ anụ nwere njikọ/akpụkpọ anụ Microfiber. Ewezuga ọnụ ahịa asọmpi siri ike n'ahịa, agba dị iche iche na ụdị ọgbara ọhụrụ dị, yana njiri mara mma.
Ahụghị m ahịrị na agba m chọrọ na webụsaịtị gị. Kedu ihe iji ya mee?
Biko ziga nlele gị na adreesị anyị, mgbe ahụ anyị nwere ike gosi gị ihe pụrụ iche. Ụlọ nyocha R&D anyị nwere ndị ọkachamara kemist nke ukwuu, ndị ọkachamara agba na ndị na -ahụ maka mmepe ngwaahịa ndị nwere ike ịmepụta ngwaahịa omenala nke dabara nkọwa gị.
Kedu oge ịkwụ ụgwọ ụlọ ọrụ gị?
Oge ịkwụ ụgwọ maka onye ahịa ọhụrụ bụ nkwụnye ego na itule T/T 30% tupu mbupu ma ọ bụ L/C. anyị nwere ike kpaa maka oge ịkwụ ụgwọ ka mma mgbe ọtụtụ iwu rụchara nke ọma.